Global Voices teny Malagasy » Mampiseho Fanitsakitsahana Zon’olombelona Any Sahara Andrefana Ireo Mpanatontosa Horonantsary Fanadihadiana Na Dia Eo Aza Ny Fandrahonan’ny Sivana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Janoary 2018 18:44 GMT 1	 · Mpanoratra Ivar Fersters Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Sahara Andrefana, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Ny vahoaka Sahrawi tao Laayune, Sahara Andrefana, enjehin'ny polisy Maraokana misahana ny korontana. Efa mahazatra ny mahita polisy maro kokoa noho ny mpanao fihetsiketsehana. Saripika avy amin'ny 3 Stolen Cameras.
Tsy mizara tantara firy mikasika ny fiainana any Sahara Andrefana – faritany ifandirana fehezin'ny governemanta Maraokana – ny olona monina ao an-toerana.
Ao anatin'ny tontolo fehezin'ny miaramila miaraka amin'ny fanaraha-maso hentitra amin'ny fampitam-baovao sy ny tatitra ataon'ny olom-pirenena dia tantara vitsivitsy avy any amin'ny faritra andrefan'i Sahara no ren'ny vahoaka any amin'ny faritra voakasik'izany. Saingy manana fahafahana hanova izany ny horonantsary fanadihadiana vaovao iray izay manasongadina ny tolona ataon'ny vondrona fampitam-baovao tsy miankina iray mba hitaterana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Sahara Andrefana .
Nalefa voalohany  tao amin'ny Fetiben'ny Horonantsary Fanadihadiana DOK Leipzig tany Alemaina tamin'ny volana Novambra lasa teo ity horonantsary mitondra ny lohateny hoe 3 Stolen Cameras (Ny Fankantsary 3 Nangalarina) ity na dia teo aza ny fandrahonana tamin'ny sivana sy ny olana ara-bola.
Ilay horonantsary  fohy maharitra 17 minitra izay novokarin'ny vondrona fampahalalam-baovao any Sahara Andrefana Equipe Media  sy ny famokarana sarimihetsika iombonana any Soeda RåFilm , dia sady nataon'ny Equipe Media no momba azy ihany koa. Mampiseho ny sary nalain'ny Equipe Media tany Sahara Andrefana nanomboka tamin'ny taona 2009 izany, saingy navoaka sy novokarina tany Soeda.
Mampahafantatra akaiky ny mpijery momba ny fibodoan'ny Maraokana an'i Sahara Andrefana ilay horonantsary tamin'ny alalan'ny fakantsarin'ny Equipe Media raha naka sary ny hetsi-panoherana izy ireo ary nanangona fijoroana vavolombelona momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, izay ​​matetika teo am-piafenana na teo am-pitsoahana polisy no nanaovana izany.
Nanomboka tamin'ny taona 1975 ny ady tany Sahara Andrefana rehefa nisintaka ny faritra vitsy mponina ny mpanjanaka teo aloha avy any Espaina ary nanambatra hery ireo firenena manodidina avy ao Maoritania sy Maraoka mba hamehezana ny faritra. Raha niala an'i Sahara Andrefana ny Maoritaniana taty aoriana, dia mbola nifehy ilay antsoina  indraindray hoe ” ilay faritr'i Afrika nozanahana farany’ ny tafika Maraokana . Nandritra ny 16 taona, niady ny fahaleovantena tamin'i Maraoka ny vondrona mpikomy fantatra amin'ny anarana hoe Polisario Front , talohan'ny nanambaran'ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 1991 ny fampitsaharana ny ady. Nankatoavin'ny ONU ny Polisario Front ho solontena ara-dalanan'ny vahoaka Sahrawi, vondrom-poko mifangaro mipetraka any amin'ny faritra andrefan'i Sahara sy Maoritania.
3 Stolen Cameras – Horonantsary fampahafantarana fohy  avy amin'ny RåFILM  tao amin'ny Vimeo .
Ny nahaterahan'ilay horonantsary
Tonga tao amin'ny fetiben'ny sarimihetsika tao Leipzig ny 3 Stolen Cameras taorian'ny asa mafy nandritra ny taona maro nivezivezena firenena maro, fiteny samihafa ary olana ara-pitsarana maro.
Nifandray tamin'ny alàlan'ny tambajotra-piraisankina tao an-toerana niaraka tamin'ny Sahara Andrefana ny ekipan'ny RåFilm sy Equipe Media taona vitsy lasa izay. Fotoana fohy taorian'ny namoahana ny horonantsary fanadihadiana Palestiniana 5 Broken Cameras  (Ny fakantsary 5 potika), izay nahazo ny Oscars tamin'ny taona 2013, no nipoiran'ny hevitra momba ny 3 Stolen Cameras.
Raha miresaka momba ny tantaran'ny fanapotehana ny fankatsarin'ny mpamboly sady mpikatroka Palestiniana iray ny 5 Broken Cameras rehefa nikasa ny hitatitra ny hetsi-panoherana tao an-tanànakeliny manohitra ny fangàlan'i Isiraely ny tanim-pambolena, ilay horonantsary Sahrawi kosa miresaka manodidina ny fakantsary miisa 3 nalain'ny manampahefana Maraokana avy amin'ny mpikatroka Equipe Media nandritra ny fangalan'izy ireo ny sarin'ny hetsi-panoherana tao Sahara Andrefana. Mitantara momba ny tolona tamin'ny fanaovana tatitra sy ny fanasongadinana ny fanitsakitsahana nandritra ny fibodoana ireo sarimihetsika roa ireo.
Ny olana tamin'ny fanohanana ara-bola
Amin'ny maha famokarana avy amin'ny vondrona fampitam-baovao mpikatroka izay manohitra ny fampielezan-kevitry ny governemanta Maraokana momba ny Sahara Andrefana azy, dia matetika tratran'ny fandrik'izany fampielezan-kevitra izany ny ekipa ao ambadiky ny 3 Stolen Cameras, ary nahilikilika ny asa fanaovan-gazetin'ny Equipe Media sy ny mpitantara mpanohitra hafa satria noheverina fa mikatsaka tombontsoa manokana izy ireo. Vao mainka nanamafy ny fanakanana ny fampahalalam-baovao Maraokana izay milaza ny tenany fa tsy mitanila ny fanilikilihana toy izany ary sarotra ho an'ireo mpamokatra ny horonantsary ny nitady fanohanana ara-bola.
Nitantara taminay ny zavatra niainan'ny RåFilm tamin'izany i Anna-Klara Åhrén, mpanatontosa lefitra ny 3 Stolen Cameras avy Soeda raha nanao fangatahana fanohanana ara-bola ho an'ny 3 Stolen Cameras izy ireo:
Indraindray dia toy ny mitaky amin'ny RåFilm mba hamerina tanteraka ny horonantsary ireo mpamatsy vola ireo mba hahatonga izany tsy hifantoka amin'ny resaka politika be loatra fa mba ho artistika kokoa . Toa hafahafa ho ahy ny hanao izany miaraka amin'ny fitaovana matanjaka toy izany.
Nandray anjara tamin'ny dinidinika niarahana tamin'ny Equipe Media izahay niaraka tamin'ny mpanao gazetin'ny Lohataona Arabo ary nanaitra ny nahita azy ireo ho mpikatroka avokoa. Saingy tsy afaka manao toy izany eto Soeda , tsy ekena ny maha-mpikatroka rehefa miara-miasa amin'ny fampitam-baovao ianao. Tena tsy misy dikany izany raha mihevitra isika fa misy demaokrasia eto!
Voasivana tao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena tao Beirota
Tamin'ny volana Oktobra 2017, nanambara ny Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena tao Beirota (BIFF) fa hampiantrano ny fampisehoana voalohany indrindra ny 3 Stolen Cameras izy ireo. Fandresena lehibe ho an'ireo mpanatontosa horonantsary izany, satria natao ho an'ny vahoaka Arabo ny 3 Stolen Cameras miaraka amin'ny fitantarana amin'ny fiteny Arabo.
Fotoana fohy taorian'izay anefa dia nanomboka naneho ny ahiahiny ny ekipan'ny mpikarakara ny fetibe fa mety ho tratran'ny sivana ilay sarimihetsika. Araka ny filazan'ireo mpamokatra ny horonantsary, nandresy lahatra ny solontenan'ny Equipe Media ny mpiasan'ny BIFF mba tsy hanatrika akory ilay lanonana noho ny tahotra fa mety hisarika ny sain'ny manampahefana izany.
Fihetsiketsehana manohana ny fahaleovantena tao Laayune, renivohitr'i Sahara Andrefana. Teny ambony tafo ny mpakasarin'ny Equipe Media no naka sary mba handrakitra am-pilaminana sy hijery ny zava-misy eny an-dalambe.
Kelikely taorian'izany, nanambara ny fetibe fa tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny mpanivana Libaney ny 3 Stolen Cameras roa andro mialoha ny fandefasana ny horonantsary ary hofoanana noho izany. Tsy avy tamin'ny ekipan'ny fetibe akory no namantaran'ireo mpanatontosa horonantsary ity vaovao ity, fa tamin'ny alalàn'ity fanambarana  manaraka ity tao amin'ny tranonkalan'ny BIFF:
Malahelo izahay milaza fa voasivana ary tsy afaka alefa noho izany ny “3 Stolen Cameras” avy amin'ny Rejection Front – Kianjan'ny Daholobe .
Tsy nanome ny antsipiriany fanampiny momba ny antony na ny antoko ao ambadik'ity fanapahan-kevitra nahatonga ny sivana ity ny fetibe .
Nilaza ireo mpamokatra sarimihetsika fa nanery ny manampahefana Libaney ny governemanta Maraokana mba hanivana ilay sarimihetsika. Nitatitra ny fampahalalam-baovao ao an-toerana ao Maraoka fa nanery ny sampan'ny governemanta Libaney miisa enina samihafa ny ambasadaoro Maraokana ao Libanona mba handrara ny fandefasana izany. Samy nanaiky avokoa izy enina ireo ary nitaky ny hanafoanana ilay fandefasana izany voalohany indrindra.
Nofaritan'ny  tranonkalam-baovao ao an-toerana le360.com ho “manimba” ny fitakian'i Maraoka any Sahara Andrefana ilay sarimihetsika ary nanamafy ity tranonkalam-baovao ity fa namboarimboarina sy novokarina tany Alzeria (izay manohana ny Polisario Front ) ilay sarimihetsika. Tsy niresaka momba ny Equipe Media sy ny RåFilm ilay lahatsoratra.
Raha naneho hevitra momba ny fanangonam-baovaon'ny fampitam-baovao Maraokana momba ny horonantsary sy ny fanasivanana izany tao Libanona dia hoy i Anna-Klara:
Raha ny hevitro, heverina ho milaza zavatra ratsy foana ny sivana ka raha mihevitra ny tenako ho tompon'andraikitra amin'ny sivana aho dia ataoko ao anaty fahanginana izany. Tsara ny manamarika fa tsy tahaka izany no mitranga ao Maraoka fa toy ny hoe mirehareha sy milaza am-pahibemaso ny fomba hanaovany izany izy ireo.
Nilaza i Anna-Klara tao anatin'ny resadresaka nifanaovanay fa azo heverina ho manaporofo ny hatsaran'ny tetikasan'izy ireo ny valinteny nataon'ny governemanta Maraokana ho an'ny 3 Stolen Cameras .
Vao mainka hampitombo ny fahalianan'ny vahoaka momba ity horonantsary ity ny fanasivanana ilay horonantsary tao Libanona. Fotoana fohy taorian'ny zava-nitranga tao amin'ny BIFF, nanasonia  ny fanangonan-tsonia ho fanoherana ny fanasivanana ny 3 Stolen Cameras ny fetiben'ny sarimihetsika iraisam-pirenena miisa 20.
Fotoana fohy taorian'izay, lasa mpampiantrano ofisialy ho an'ny fandefasana voalohany indrindra ny 3 Stolen Cameras ny Fetiben'ny Horonantsary Fanadihadiana DOK Leipzig. Na dia tsy izany aza no nanaovana ny sarimihetsika ho an'ny vahoaka Arabo dia fomba hafa nahasolo azy kosa ny DOK Leipzig. Noraisin'ny mpijery an-tanan-droa ny 3 Stolen Cameras ary voafidy tamin'ny fifaninanana ho an'ny sarimihetsika fohy tsara indrindra. Amin'ny fotoana maha mety izany rehefa handefa ireo sarimihetsika miavaka ny fetibe dia ho avy ny fotoana handefasana antserasera ilay horonantsary ary afaka hijery izany ireo mpijery ao an-toerana any Sahara Andrefana aorian'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/29/114133/
 3 Stolen Cameras – Horonantsary fampahafantarana fohy : https://vimeo.com/221398816